I-PSL izokhipha isinqumo ngokudayiselwa koSuthu iThanda | News24
I-PSL izokhipha isinqumo ngokudayiselwa koSuthu iThanda
Johannesburg - INational Executive Committee (NEC) yePremier Soccer League (PSL) izohlangana ngesonto elizayo mayelana nesicelo esifakwe AmaZulu sokuthenga iThanda Royal Zulu, ngokusho kukaProfessor wePSL, uRonnie Schloss.
IThanda ikhushulelwe esigabeni sePSL ngesizini eyedlule kulandela iminyaka engu-8 idlala esigabeni seNational First Division ngemuva kokuya ehlathini ngonyaka ka-2009.
Beqeda nje ukuphakamisa inkomishi yesicoco seligi yeNFD, uSihlalo wamaBhubesi, uPierre Delvaux, watshela iKickOff ukuthi uzobheka indaba yokuyidayisa le kilabhu ngenxa yezindleko eziphezulu zokuphatha ikilabhu, wabe esenxusa osomabhizinisi abanentshisekelo ukuba beze etafuleni.
OLUNYE UDABA: Naba abadlali abahola kakhulu kunabo bonke kuPSL
Kodwa-ke lesi sinqumo sakhe sokudayisa asehlanga neze kahle koMasipala ababili baKwaZulu-Natal, okunguMhlathuze noThungulu, nabanxuse isigungu esiphezulu sePSL ukuthi singakugunyazi lokhu kuthengwa ngemuva kokuthi labo masipala baqinisekisa ukuthi yibona abebesiza leli qembu ngezimali – kodwa-ke uDelvaux uthi lolu xhaso belunganele.
Oyi-General Manager yoSuthu, uLunga Sokhela, ukudalulile ngesonto eledlule ukuthi isivumelwano sesenziwe nomnikazi weThanda, manje konke sekusele kwisigungu esiphezulu sePSL ukuthi senze isinqumo.
USchloss ukuqinisekisile ukuthi uma isicelo sifakiwe, sizolalelwa emhlanganweni olandelayo wekomiti lePSL.